Kugadzirisa Kushungurudzika Paunenge Uine Spinal Cord Kukuvara
Isu tese tinosuruvara pane imwe nguva muhupenyu hwedu. Ichi chikamu chakazara chehupenyu. Asi dzimwe nguva vanhu vanoona zvinopfuura kusuwa pane dzimwe nguva muhupenyu hwavo. Kushungurudzika idambudziko rinotambudza iro zviuru nezviuru zvevanhu veAmerica vanotambura nazvo uye zvinokanganisa chikamu chega chehupenyu hwako hwezuva nezuva.
Zviratidzo zvekushushikana zvinosanganisira matambudziko ekurara, kunzwa kusava netariro, kushomeka kwekufarira, kudzikisira zviitiko, kudzikisira kudya, kuramba uchineta uye pfungwa dzekuda kuzviuraya.
Vanhu vakatambura a musana kuipa inowanzo kuve yakanyanya kutarisana nekuora mwoyo kana ichienzaniswa nehukuru hwevanhu vakuru. Sezvinoratidzwa nechimwe chidzidzo, angangoita munhu mumwe chete pagumi vekuAmerican akapfuura nepakati pechikamu chimwechete chekushungurudzika.
Chiyero chekushushikana kune avo vane musana kukuvara kunobva ku11% kusvika pamusoro pe35%.
Izvi zvinonzwisisika mumamiriro ezvinhu; zvakadaro kukunda kuora mwoyo kunogoneka kunyangwe iwe uine musana kuipa. Unogona kuenderera uine hupenyu hwakazara, hunoshanda uye hunofadza.
Tsvaga rubatsiro rwehunyanzvi
Kana iwe uchinzwa iwe uine zviratidzo zvekuora mwoyo, iwe unofanirwa kubva wakurumidza kutsvaga rubatsiro kubva kuna vanokwanisa chipangamazano. Ivo vanogona kukurudzira kuti utange kutora imwe mhando yeanodzvinyirira kuti ubatsire kuwedzera uropi hweserotonin mazinga ayo anozokubatsira iwe kuve unowedzera kukurudzira uye kutarisira.
Chero mhando yekurapa kwezvinodhaka inofanirawo kusanganisira kuraira, izvo zvinokupa iwe maonero pane ako kuremara uye kukubatsira iwe kuona kuti yako yapfuura yakagadzira sei yako ikozvino maonero. Paunenge uchinge uine kumwe kujekesa zvichave nyore kuita shanduko dziri dzakanaka.
Kurara, Kudya, uye Hupenyu Hwako miitiro inogona kunge iri Kuita kuti Zvinyanye
Munguva inoreva nguva iwe unofanirwa kuyedza kuona mararamire maitiro angave ari kuita kuti kushushikana kwako kuwedzere. Gara kure nedoro uye ita shuwa kuti iwe unowana yakakwana yekurara husiku. Idya chikafu chinovaka muviri, ona anoona nezvehutano kana iwe usingazive pekutangira.
Kuita kurovedza muviri uye kushandisa nguva uchiita zvinhu zvaunoda nevanhu vaunoda zvinokubatsira kuti unzwe zvakanaka. Edza zvinhu zvitsva kana kuwana hobho iwe yaunoda chaizvo kuita.
Midziyo yako yekurapa ichaitawo basa rakakosha mukufara kwako kwese. Ive neshuwa kuti une chaiyo michina uye inochengetedzwa nemazvo.